01/06/13 ~ Myanmar Forward
တပ်မတော်နှင့် KIA အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု စစ်ရှိန်လျော့ကျသွားခြင်း မရှိသေး
တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု စစ်ရှိန် လျော့ကျ သွားခြင်း မရှိသေးကြောင်း KIO မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ဇန်န၀ါ ရီလ ၅ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် Eleven Media Group သို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့၌ ကရင်ပြည်နယ် ကမမောင်းမြို့နယ်တွင် BGF အယောင်အဆောင်များ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်
Posted by drmyochit Sunday, January 06, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင်ကရင်ပြည်နယ်၊ကမမောင်း မြို့နယ် တွင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) အယောင် ဆောင်များ ဟု ယူဆရ သူများက မြို့နယ်တွင်းရှိ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်များ အား ဝင်ရောက် ပစ်ခတ် သွားကြောင်း သိရသည်။
ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းကျေးရွာရှိ ဟွန်ဒါမြန်မာ ကုမ္ပဏီပိုင် သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ အတွင်း၌ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၂၉ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲက မစိုးသက်အေး ၁၅ နှစ် (ဘ) ဦးမင်းသန်း (အုတ်ဆုံ ကျေးရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်) သည် ညဆိုင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်
မြင်းမူမြို့ မြို့ရှောင်လမ်း ရေကျော်တွင် ယာဉ်တစ်စီးတိမ်းမှောက်
ယမန်နေ့ နံနက် ၄ နာရီခွဲက မြင်းမူမြို့မြို့ရှောင်လမ်း ရေကျော်တွင် ယာဉ် တစ်စီး တိမ်းမှောက်ကြောင်း သတင်းအရ ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ် ကြပ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ရာ နံနက် ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က မြင်းမူမြို့ မြို့ရှောင်လမ်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကို အပုပ်ချ ဆန္ဒပြသူများအကြောင်း
နိုင်ငံ အဝှမ်း တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ် ပွဲများတွင် ကြည့်မြင် တိုင်မြို.နယ် တွင်မှ ထူးခြား၍၂၃.၁၂.၂၀၁၂ နေ.တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အား ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘောဂ ရပ်ကွက်ပြည် သူတို.၏ ပြောကြား သံများကို စာရင်းနှင့် တကွ ဖေါ်ပြ လိုက်ပါသည်။
လိုင်ဇာဌာနချုပ်သို့ တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်ပြီဟု အွန်လိုင်းကေအိုင်အေတို့ပြော
မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက် ခဲ့သည့် (၇၇၁) ကုန်းနှင့် ဟန်ကိုင် တောင် တို့ မှKIA, လိုင်ဇာမြို့ ထဲသို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ဒီနေ့ မနက် ၉နာရီ ကျော် မှ စတင်ကာ ပစ်ခတ်နေ ပြီး ယခု သတင်းရေးနေ ချိန် အထိ အကြိမ်ပေါင်းအများအပြားပစ် ခတ်နေ ကြောင်း လှိုင်ဇာမြို့ ခံများ မှ သတင်းပေးပို့ လာပါသည်။
ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ ရရှိသော ငွေများကိုနယ်စပ်ဒေ သရှိ ရွှေ့လျားကျောင်းများအတွက် လှူဒါန်းရန် လျာထား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ ရရှိသော အလှူငွေများထဲမှ နယ်စပ်ဒေ သရှိ ရွှေ့လျားကျောင်းများအတွက် လှူဒါန်းရန် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ လျာ ထားကြောင်း ပညာရေး ကွန်ရက်မှ ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင်ဒေါက် တာသိန်းလွင်ကပြောသည်။
ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ် လိုင်ဇာကို ကာကွယ်ရန် ဒုက္ခသည်စခန်းများကို လိုင်ဇာမြို့ပတ်ပတ်လည်တွင် အကာအကွယ်ဖြင့် ထားရှိ
ကေအိုင်အေ တပ်နဲ့ အစိုးရ တပ်တွေက တိုက်ပွဲတွေဖြစ် ပွားနေပြီး အစိုးရ တပ်များက လဂျားယန် တောင်ကြောကို သိမ်းပိုက် ရရှိပြီး တဲ့နောက် တွင် ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာကို ကာကွယ်ရန်
လိုင်ဇာမြို့ တွင်းတွင် လည်း ဈေးဆိုင် များအားလုံး လိုလို ပိတ်ထား ကြပါသည်။ လိုင်ဇာမြို့ မှဈေးဆိုင် အများစုမှာ ကေအိုင်အေ ကေအိုင်အို အဖွဲ့ လူကြီးများ၏ ဈေးဆိုင် များဖြစ်ပြီး တချို့မှာ တရုတ်
KIA ခေါင်းဆောင်များ၏ မှားယွင်းသော ခံယူချက်များကြောင့် ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အလင်းဝင်မှု များပြားလာ
ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း KIA အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် အစိုးရ တပ်များထံ အလင်း ၀င်ရောက် မှုများ များပြား လာသည်။ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လမ်း/တံတား များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်နယ်မြေသို့အစိုးရတပ်နယ်ကျွံ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါး အစိုးရတပ် တယောက်သေ
05. 01. 2013 နံနက်ပိုင်း၌ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လင်းခေးခရိုင် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲ အတွင်း သျှမ်းပြည် တပ်မတော် နှင့် မြန်မာ အစိုးရ တပ်တို့ အကြား တိုက်ပွဲ သုံးကြိမ် ထက် မနည်း ဖြစ်ပွား ကာ အစိုးရ တပ် တယောက်ေ သဆုံး ကြောင်း ဟိုမိန်း သတင်း ရပ်ကွက်က ပြောပါသည်။
လူနည်းစု အရေး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှုတ်ဆိတ် မနေသင့်
တခါတရံ စကားလုံး ဝေါဟာရ များသည် ပဋိပ က္ခကို မီးထိုးပေး တတ်သည်။ သို့ရာတွင် ဆိတ်ဆိတ် ငြိမ်ခြင်း ကလည်း မဖြစ်မနေ ငြှိမ်းသတ်ရန်လိုနေသည့် မီးတော က်မီးလျှံကို
မနက်စောစော စီးစီး ရေးစရာ ရင်တွင်းဖြစ်လေး ပေါ်လာလို့ပါ ပြည်တွင်း စစ်မှာ လေယာဉ်သုံးခွင့်မရှိ Close Air Support ပြုလုပ်ခွင့် မရှိလို့ ဘယ်နိုင်ငံ တကာ သဘော တူညီချက် များရှိ ပါသလဲ။ ကျွန်တော် အသက် ငယ်သေး လို့ ဗဟုသုတကလည်း အများကြီး မရှိပြန် ဆို တော့လေ မသိလို့ပါ။
KIA အပေါ် အစိုးရစစ်ဆင်မှု ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားကြောင်း ABSDF ပြော
လဂျားယန်မှာ အုပ်ချုပ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြား စာလည်း ပို့ထားတယ်။ လိုအပ်တာပဲ လုပ်ပြီး အင်အား အကန့်အသတ်နဲ့ ဆောင်ရွက် တယ်။
ဒုက္ခသည်နှင့် ပတ်သက်သည့် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက် မှားယွင်း
မြို့ပေါ်၌ရှိသောကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်စခန်း များအား အစိုးရဘက်မှ တာဝန်ယူ ဖွင့်လှစ်ပေးထားရသည်ဟု ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် နေပြည်တော် ထုတ်ပြန်ချက် မှားယွင်းကြောင်း ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းတာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆာ က ပြောဆိုလိုက်သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ကသာမြို့တွင် ခရိုင် သစ်တော ဦးစီး ဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင် ၀င်း၏ ပွင့်လင်း ရာသီစစ်ကြောင်း လမ်း ညွှန်ချက်အရ မြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးဌာ နမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်း ထွန်းခေါင်း ဆောင်သော အဖွဲ့ သည် တောအုပ်ကြီး ဦးကျော်ဦး၊တော အုပ်ဦးဇော်ဝင်း၊ဦးမျိုးဇော်ညွှန့်၊
ကော့သောင်းလူကုန်ကူးအထူးအဖွဲ့နှင့်‌ရနောင်းလူကုန်ကူး နယ်စပ်ဆက်ဆံရေးရုံးပူးပေါင်း၍ မြန်မာ အမျိုး သမီး (၆) ဦးအား ကယ်တင်
၂၉-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၂၀၁၀ အချိန်တွင် တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် (လူကုန်ကူး) တိုင်တန်းချက်ဖုန်းသို့ ၎င်း၏တူမဖြစ်သူ မ xxxxxxပါ ၆ ဦးအား မခင်သီတာနိုင်(ခ) မသံဇဉ်၊ ၃၀ နှစ်၊( ဘ) ဦးကျော်မင်းထွန်း၊ ဥက္ကာ ၂ လမ်း၊ မြောက် ဥက္ကလာ
၂၀၁၃ ဇန်န ၀ါရီ ၅ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဘန်ကောက်မြို့ နှင့်၇၅ ကီလို မီတာ အကွာ တွင်ရှိသော ချာချင်း စောင်မြို့ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် ဘန်ကရောက် ရွာရှိ
Posted by drmyochit Sunday, January 06, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း | No comments
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက် ရှိနေတဲ့ ဂျပန်ဒုဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာတာရိုအာဇိုရဲ့ ယနေ့ ဂျပန် စစ် သချိုင်းကို သွားရောက်ဂါဝရပြုတဲ့ အခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင် ငံကို အလည်အပတ်ဗီဇာနဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ် လူမျိုး များ လို့ ယူဆရတဲ့သူတွေက ဂျပန် စစ်သချိုင်း မှာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့က ဘတ်စကားတစီးပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လက အုပ်စုနဲ့ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရပြီး ရိုက်နှက် ခံရလို့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆေးကျောင်း သူလေးနဲ့ အတူပါ လာတဲ့ အမျိုးသား မိတ်ဆွေက သူတို့ရဲ့ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် စရာ အတွေ့အကြုံကို ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့ ရှိ ကွမ်းခြံများ ဖျက်ဆီးခံနေရမှုအား အကြိမ်ကြိမ်တိုင်ကြားသော်လည်း အာဏာပိုင်များ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းမရှိ
မြောက်ဦးမြို့၊ အလယ်ဈေး အုပ်စု၊ ဝသဲရက်ကွက်အနီး တောင်ယာမြေ တွင် ရခိုင်များ လုပ်ကိုင် စားသောက် နေ သောကွမ်းခြံ များကို ကုလားများ လာရောက် ဖျက်ဆီးနေခြင်း အား အရေးယူဆောင်
အတူယှဉ်တွဲမနေထိုင်လိုသည့်ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ တောင်းဆိုချက်များအား အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များမှ အလေးထားသင့်ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ် လူမျိုးစု ပဋိ ပက္ခများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင် လူမျိုးများ အနေဖြင့် အတူ ယှဉ်တွဲ မနေထိုင် လို သည့်တောင်း ဆိုချက်များအား